Arday baratay luuqada Turkey oo Muqdisho shahaadooyin lagu gudoonsiiyay – Radio Muqdisho
Arday baratay luuqada Turkey oo Muqdisho shahaadooyin lagu gudoonsiiyay
Ardaydan shahaadooyinka la guddoon-siiyey oo dhammeystay barashada luqadda Turkiga ayaa tiradoodu aheyd 40 arday, kuwaasoo qaatey koorso saddex bilood ah oo ay ku baranayeen luqadda waddankaasi.
Ardaydan oo wax ka barta dugsiga Beder Secondary School oo xarun u ah dugsigii hore ee Farsamada Gacanta oo ay hadda gacanta ku heyso hay’ad la yiraahdo NILE ORGANIZATION ayaa sidoo kale hay’addu waxay shahaadooyin guddoonsiisay qaar ka mid ah macalimiintii waddankaasi u dhashay ee ardeydan luqadda Turkiga baray.
Maamulaha Dugsiga Beder Bilal Kose ayaa ugu hambalyeeyay ardayda muddada kooban ee ay luqadda Turkiga ku barteen wuxuuna sheegey barnamijyada noocan ah iney sii wadi doonan “Waxaan idunkugu hambalyeynayaa barashada luqada turkiga waxana idiin balan qadayaa inan sii wadi doono barnamijyada an ku bahineyno luqadda Turkiga anaguna waxan intaa idanka sii baraneyna luqadda Soomaaliga si an u hormarino xiriirka iyo isdhex-galka bulshada labada wadan ). Sidoo kale mamulahu waxa uu sheegey koorsooyin luqado kala duwan ardeyda soomaaliyeed ay ku sinayaan iney hayada Nile billaabi doonto sannadka soo socda.
Qaar ka mid ah ardeyda dhammeystay barashada luqadda Turkiga ee shahaadoyinka la guddoon siiyey ayaa muujiyey sidey ugu faraxsan yihiin barashada luqaddaasi “1- aAad baan ugu faraxsanahey shahaado inaan ka qaato luqadda Turkiga 2-muddo dheer luqad an baraneynay ayaan maanta shahado ka qadaneynaa waxaan aheyn 40-tan ardey oo halkan isku wada bartay kana wada fa ideystay barashada luqada Turkiga” .
Hay’adda NILE ORGANISATION ee gacanta ku heysa dugsiga Beder Secondary School oo hadda xarun u ah dugsigii hore ee Farsamada Gacanta (Buulo Tikniko) ayaa waxey halkaasi wax ku baraan ardey Soomaaliyeed ayadoo sidoo kale magalada Muqdisho ka hirgalisay mashaariicyo ay ka mid yihiin goobo caafimaad sida Isbitaalka DEVA.